Ehelada Qoyska Reer Sheekh Bashiir Oo Cabasho Ka Muujiyey Iskuulka Sheekh Bashiir Ee Hargeysa Oo Magacii Laga Bedelaayo | Eryal Tv
Home News Ehelada Qoysk...
Ehelada Qoyska Reer Sheekh Bashiir Oo Cabasho Ka Muujiyey Iskuulka Sheekh Bashiir Ee Hargeysa Oo Magacii Laga Bedelaayo
Hargeysa (ERYALTV):- Qaar ka mid ah ehelada iyo qaraabada qoyska caanka ah ee reer Sheekh Bashiir, ayaa cabasho xooggan ka muujiyey iib ay sheegeen in ay xukuumaddu iibinayso dugsiga hoose/dhaxe ee Sheekh Bashiir oo ku yaala badhtamaha magaalada Hargeysa, iyaga oo sida oo kale na guddoomiyaha xisbiga KULMIYE ku eedeeyey in uu wado qorshe magaca Iskuulkaas laga ga bedelaayo isla mar ahaantaana looggu bedelaayo magaca GANDI, waxaana ay sheegeen in ay aad uga xun yihiin in la tir-tiro taariikhd guunka ah ee uu lahaa Alle ha u naxariistee Aabahood Sheekh Bashiir.
Eheladan iyo qoyskan oo ay ka mid ahaayeen Cabdicasiis Sheekh Bashiir Xaaji Suufi, Cabdixakiin Sheekh Cabdirisaaq Sheekh Bashiir, Axmed Maxamuud Sacmaan, Jamaal Cabdiraxmaan Axmed Food iyo Yuusuf Cabdicasiis Sheekh Bashiir, ayaa ay hadalkan ku sheegeen shir-jaraa’id oo ay maanta ku qabteen magaaada Hargeysa, waxaana ay sheegeen in aanay marnaba aqbali doonin tallaabadaas.
“Aniga oo ah Cabdicasiis Sheekh Bashiir, waxa aan ka hadlayaa taariikhdii Aabahay oo la iibiyey, arrintaas oo umaddii ba qaadan weyday wixii maqlay ba, waxa la iibiyey na waa wax weyn oo taariikhdii waqiiyiga oo idil baa la iibiyey. Aabahay waxa uu u dhintay diinta iyo dalka, ayaa la yidhi waa la iibiyey taariikhdiisii oo wax aan kufkiisa ahayn baa dee lagu la dhaqmay, kolkaas waxa aan u sheegaynaa dadka dee anaga sheekh Bashiir waa uu na dhalay uun ee dee dalka ayuu taariikh u yahay.”.Ayuu yidhi Cabdicasiis Sheekh Bashiir Xaaji Suufi oo ugu horreyn halkaas ka hadlay.
Cabdixakiin Sheekh Cabdirisaaq Sheekh Bashiir iyo Axmed Maxamuud Sacmaan oo iyagu na dhankooda halkaas ka hadlay, ayaa waxa ay yidhaahdeen.”Annagu waxa aanu diideynaa magaca la baa biinaayo ee la tir-tiraayo ee la duminaayo ee la dhisaayo ee laga dhisaayo oo dad kale loogga dhisaayo, waxaana aanu u aragnaa talaabo lagu baabiinaayo taariikhda Sheekh Bashiir oo ahaa nin mujaahid ah oo dalka iy diinta ba u soo halgamay.Madaxweyne Axmed Siilaayo waxa aan lee yahay ninkan Gaandi la yidhaahdo ee aad Sheekh Bashiir gudahiisa soo gelisay ee uu dabada kariixaayo Muuse Biixi, waxa aanu ka xunahay ee ninkaa naga kaxee. Somaliland oodhan baad Madaxweyne u tahay oo meel magaciisa lagu qoro umaad waayinee ninkaas naga kaxee, aad baanu uga xunahay oo Sheekh Bashiir gudahiisii baa la dhisanayaa, magac la yidhaahdo Gaandi baa loo bixinayaa, waar aqbali mayno oo aqbali mayno waxaas. waxa aanu lee nahay beeshii Yaasif Maxamed na waa ay ka xun tahay Somaliland ta kale oo dhammi na waa ay ka xun yihiin. Ninka Gaandi la magac baxaayow ee leh Sheekh Bashiir baan ku qoranayaa yow gudcur baad gudaysaa.”.
Jamaal Cabdiraxmaan Axmed Food iyo Yuusuf Cabdicasiis Sheekh Bashiir oo iyagu na dhankooda halkaas ka hadlay, ayaa Muuse Biixi ku eedeeyey in uu wado qorshe magaca laga ga bedelaayo Iskuulka Sheekh Bashiir ee Hargeysa.”Waxa aanu aad uga xun nahay iibka uu wasiirka Madaxtooyadu iibinaayo dugsigii Sheekh Bashiir iyo weli ba tallaabada uu Muuse Biixi ku doonaayo in uu ku bedelo magaca Iskuulkaas. Waxa aanu halkan ka sheegaynaa in guddoomiyaha xisbiga KUMIYE iyo murashaxiinta xisbiga KUMIYE in arrintaasi ay dhabar-jab weyn ku tahay in ay baabiiyaan taariikhdii halgemayaasha gaar ahaan Sheekh Bashiir iyada oo weiliba uu Muuse cod ka rabo umadda Somaililand.”.
Eheladan iyo qaraabaddan qoyska caanka ah ee reer Sheekh Bashiir, waxa ay sida oo kale ay si wada-jir qoraal u soo gaadhsiiyeen warbaahinta uu udhignaa sidan:
Waxaynu wada ogsoonahay hadaynu nahay ummada reer Somali-Land iyo guud ahaan inta af-Soomaaliga ku hadashaba inay jireen dad ama shaqsiyaad Soomaali ah oo taariikhda Soomaalida ku suntanaa ama si gaar ah loo tix geliyo oo meeqaam sare kaga jira taariikhda Soomaalida, taas oo ay ku mutaysteen Halgan iyo Dadaal dheer oo ay u galeen Diinta, Dalka iyo Dadkaba, kuna naf iyo maalba waayeen.
Hadaba waxaynu ognahay Sheekh Bashiir Xaaji Yuusuf Xaaji Xasan inuu ahaa geesi halgamaa ah oo Naf iyo Maalba ku waayey halgankii Gobannimo-Doonka ahaa ee uu la galay Gumaystihii Ingiriiska – taas oo laga bilaabo 1960kii dhamaan Dawladihii soo maray gayiga Soomaalidu degto ay u sameeyeen Hab-maamuus taariikheed oo aad u sareeya, kadib markay arkeen in taariikhda Sheekh Bashiir ay tahay Cadceed. Waxay u hibeeyeen oo ay ku sunteen goobo faro badan sida Iskuulo, Taalooyin iyo Golayaal Madadaalo oo ku kala yaala guud ahaan Dhulka Soomaalidu degto, iyo in lagu daray Manhajkii Waxbarashada Soomaalida.
Hadaba manta waxa Somaaliland nasiib daro u ah in iyada oo Axmad Siilaanyo Madaxweyne ka yahay, aqoon badana u leh Halganka iyo dhibaatooyinkiisa, in manta awoodiisa Madaxweyne lagu baabiiyo taariikhdii Sheekh Bashiir, isna uu raali sidaa kaga yahay, waa Shaambad Madow oo ku dhacday taariikhda Axmad Siilaanyo. Sidoo kale waxay saa,ayn xun ku yeelanaysaa Xisbiga Kulmiye iyo doorashadiisa Madaxtooyo. Gaar ahaana Murashaxa Madaxweyne ee Muuse Biixi, taas oo kala fogaynaysa beelihii ku midaysnaa Xisbiga Kulmiye. Mar hadii magiciii Schoolka Sheekh Bashiir ee Hargeysa lagu bedelayo Gaandi oo si gaara loo siiyay Qoyska Reer Gaandi Schoolkii Sheekh Bashiir.
Hadaba Dugsiga Hoose-Dhexe eek u yaal badhtamaha magaalada Hargeysa, waxa la dhisay sanadkii 1943kii, School kaas oo soo saaray hal-doorkii iyo aqoonyahanadii ugu badnaa Somaliland, oo ay maantana dhigtaan arday ka badan 2000 oo arday. Hadaba xukuumada manta jirta ee uu hogaaminayo Axmad Siilaanyo iyo shaqsiyaad ka ag dhow ayaa garaadkoodu siiyey inay Schoolka ka iibiyaan cid gaar ah oo xidhiidh hoose la leh Madaxtooyada, kana dhigaan goob Ganacsi.
Hadaba waxaanu uga digaynaa Xukuumada Siilaanyo iyo xubnaha awoodii loo igmaday ugu Takri-faday sida khaldan hantida Qaranka inay ka dhalan doonto Amaan-Daro iyo dhibaato, mas’uuliyadeedana ay qaadi doonaan cidii fidmada abuurtay. Waxa kale oo aanu uga digaynaa dadka School kaas laga iibshay in aanuu u cuntami doonin oo ay kala kulmi doonaan dhibaato aanay diyaar u ahayn.
Cabdi-Casiis Sheekh Bashiir Sheekh Yuusuf.
Cabdi-Xakiim Sheekh Cabdi-Rasaaq Sheekh Bashiir.
Yuusuf Cabdi-Casiis Sheekh Bashiir.
Jamaal Cali Xussen Oo Ka Hadley Aragtidiisa Go,Aamadii Maxkamada Sare Ka Soo Saartey Khilaafka Xisbiga Ucid
Madaxweyne Xasan Oo Imaaraadka Dib U Raali Geliyey, Warkii Berbera Oo Laga Raacay